Ndiani Mutongi wekushambadzira Kwako? | Martech Zone
Muvhuro, Zvita 29, 2014 Chishanu, January 2, 2015 Douglas Karr
Ndakazviita muzvinyorwa zvandakanyora munguva yakapfuura. Ndine nzira dzakashata-dzakashambadzwa nevashambadziri… kubva pakushandisa vatauriri vanokanganisa kusvika pakuzvidza mhedzisiro. Kumwe kushambadzira kunosvika pandiri. Asi ini handina basa mukushambadzira equation, kana neniwo maonero angu haana kutendeseka.
Shamwari munguva pfupi yapfuura yakagovana kupihwa kwaakagamuchira kubva kukambani yaitaridzika kunge kadhi rakarongedzwa zvakanaka rine kero yakanyorwa nemaoko uye chinamirwa chakanamirwa nekero yekupindura. Zvaitaridza sekunge zvaigona kunge zvakabva kushamwari kana mhuri. Nekudaro, paakaivhura - yaive nechipo uye akanzwa kunyengedzwa. Akanga akatsamwa kwazvo, akatora pikicha ndokugovana paFacebook.
Ini handibvunze kuti kana aifanirwa kutsamwa - ndiro bhizinesi rake. Ane kodzero pamaonero ake. Mubvunzo wandakataura mumhinduro yaive panguva ipi haisi kushambadzira kufukidza kwerumwe rudzi. Isu tinogadzira masosi ezvidiki kutanga izvo zvinoita kuti zvioneke semabhizimusi ebhizinesi. Isu tinogadzira epasirose-kirasi infographics yevatengi vanonetsekana nemabhajeti avo ekutengesa. Isu tinochengetedza nyaya dzenyaya uye zvipupuriro kubva kune vatengi vanowana mhedzisiro.
Uku kunyengera here?
Mune maonero angu, kushambadzira kwakanyanya kufanana nekufambidzana. Iwe hausi kuenda kune rimwe zuva mune ayo anodikitira ziya aunokanda pamusoro. Iwe unogeza, iwe unopfeka, unowana bvudzi rako chairo uye unokanda pane imwe cologne… iwe unoda kutaridzika zvakanaka.
Unonyengera here iwe?
Iko kufunga kungave hongu. Iwe uri kutsvaga kukwezva mumwe munhu zvakakwana kuti uone kuti unovada sei ivo. Mushure memazuva mashoma, unogona kana kusasarudza kuendesa hukama.
Kuwana yakananga tsamba chidimbu chakanyorwa-ruoko kunogona kukwezva mumwe munhu zvakakwana kuti avhure. Pandakamhanya ndakanangana nemasevhisi tsamba, ndakaudza vatengi vedu kuti isu taifanira kutora kutarisisa kwemumwe munhu munzira ipfupi pakati pebhokisi retsamba nemarara. Izvo zvinoda humwe hunyanzvi hwekugadzira kuti ubude kunze kwevanhu. Tekinoroji yakashanduka zvakanyanya pakutsvaga tsamba zvekuti vamwe maprinta vane masisitimu ayo chaizvo nyora iwo mavara uye kunyange mamwe masitayera evatambi kuti pasave nemavara maviri anotaridzika zvakafanana!
Ini ndichawedzera kuti iwo matekinoroji haadhure. Mushambadzi iyeye akashandisa zvakati wandei pane iro rakanyorwa-ruoko (kadhi) kadhi pane zvavaizongonamira tsamba-peji rimwe chete mubhokisi retsamba. Kushandisa iyo mari yekuwedzera zvirokwazvo kwakakonzera mwero wepamusoro wekubatirana uye zvingangodaro zvakakonzera mukushanduka kukuru.
Mubvunzo wechokwadi kana kwete wekuti kushambadzira kunonyengera haisi yangu kana maonero eshamwari yangu. Mutongi wechokwadi tarisiro uye, pakupedzisira, kuchengetedza kwekambani kubudirira. Kana mutengi churn iri nyaya hombe, mushambadzi anogona kunge ari kukwezva vatengi asi vanogona kupotsa tarisiro uye vanofanirwa kugadzirisa maitiro avo ekutengesa.
Handifunge kukwezva mumwe munhu kuti avhure, kuona kana kudzvanya hunyengeri - ndinotenda ibasa revashambadzi kufambisa vanhu vafambe rwendo rwekutengesa uye kusvika danho ringaitwe rekuti mutengi anogona kubatsirwa nekuita bhizinesi newe .
Kuvhura iyo hamvuropu hakuna kupa chero munhu kunyorera, zvakangoita basa rakakura mukuita kuti kushambadzira kwavo kutariswe pane kuisa mumarara. Anenge mazuva ese ini ndinozviwana ndiri kuona yekutengesa, kurodha pasi whitepaper, kana kuvhura email iyo yandaifunga kuti kutambisa nguva yangu. Ini handigumbuke nezvazvo, uye handifunge kuti unyengeri.
Ini ndinongoenderera mberi.
Tags: unyengerikushambadzira kunonyengeramail yakanangazvakanyorwa nemaoko